Academia X Bebidas alcoólicas: Conheça os mitos e verdades sobre o assunto! - Suplementos Brasil
Akademia X zava-pisotro misy alikaola: tadiavo ireo angano sy fahamarinana momba an'io lohahevitra io!
6 septambra 2018 26 Novambra 2021
Eny, efa fantatry ny rehetra fa ny zava-pisotro misy alikaola dia tsy tsara amin'ny fahasalamanao, saingy fantatrao ve fa ny labiera amin'ny faran'ny herinandro dia mety hisy fiatraikany amin'ny fahaizanao amin'ny fampiofanana be loatra? Ny zava-pisotro misy alikaola amin'ny ankapobeny dia mety hiafara amin'ny fanimbana ny fahombiazanao amin'ny ankapobeny, anisan'izany ny anton-javatra sasany izay voakitika tsara toy ny fandraisana vitamina sy mineraly, olana amin'ny famokarana testosterone, tsy fahampian-drano, sns.
Ka indrisy, ho an'ireo izay tia an'io labiera io amin'ny faran'ny herinandro, eny ny valiny. Manelingelina be ilay zava-pisotro.
Izany no antony nahatongavako tao amin'ity lahatsoratra ity hampitandrina sy hampiseho ny fahavoazan'ny fisotro zava-pisotro misy alikaola eo afovoan'ny fanatanjahantena.
Moa ve ny fisotroana manakana ny fitomboan'ny hozatra?
Mba hisian'ny fitomboan'ny habetsaky ny hozatra dia ilaina ny fanentanana anabolika, fa inona kosa izy ireo? Ny fanentanana anabolika dia ny fiofanana, ny sakafom-panafody, ny famenon-tsakafo, amin'ny ankapobeny dia izy ireo no manome ny vokatra catabolic.
Raha omena dingana anabolika ianao, dia tsy hanampy izany raha tsy manadino ny fisotroana arak'izay azo atao ianao, satria raha matetika ny fahazarana dia matetika foana koa ny fizotran'ny catabolism, ka hitombo hatrany ny fahaverezan'ny hozatra. noho izany ny tombom-barotrao
Ny alikaola sy ny metabolika dia misy fiatraikany amin'ny fizotry ny fitomboan'ny hozatra amin'ny fomba maro, manakana ny anzima maro toy ny fanentanana hormonina izay mitarika hypertrophy, mahatonga anao hampiofana mafy, hihinana sakafo voalanjalanja, ary hameno ny fahaverezan'ny masonao. Matavy dia lehibe kokoa noho ianao tombony azo avy aminy.
Antony sasany mahatonga ny fisotroana mety hisy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny hozatra
Mampitombo ny famokarana ny hormonina kortisol;
Mampihena ny famokarana testosterone sy Gh;
Misy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny fandraisana hozatra amin'ny hozatra;
Mampihena ny famokarana glucose;
Ka ny filamatra dia ny tsy mihinana zava-pisotro misy alikaola rehefa mampiofana tsy tapaka ianao, mba tsy hisy fiantraikany ny tombony sy ny fahombiazanao, na dia aorian'ity lahatsoratra ity aza dia manohy mihinana labiera anao ianao amin'ny faran'ny herinandro, ny idealy dia tsy ela aorian'ny famerenanao ireo mineraly. , misotro rano be, raha azo atao, mihinana voankazo maivana, ka mameno otrikaina kely ho an'ny vatanao.
Tags:oniversitezava-pisotro misy alikaolaBodybuilding